Argagixisada ISIS oo saddex askari oo katirsanaa ciidamada Puntland ku gowracday gudaha gobolka Bari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandArgagixisada ISIS oo saddex askari oo katirsanaa ciidamada Puntland ku gowracday gudaha gobolka Bari
February 1, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Cabdiqaadir Muumin hoggaamiyaha ISIS ee Puntland oo khudbad u jeedinaya dagaalyahanada meel kutaala gobolka Bari ee Puntland bartamihii bishii April, 2016-kii. [Sawirka: screenshot]
Garoowe-(Puntland Mirror) Waxa loogu yeero maleeshiyada ISIS ayaa gowracday saddex askari oo katirsan ciidamada dowladda Puntland kuwaasoo la afduubtay bilowgii asbuucaan, sida uu sheegay sargaal.
Sargaal katirsan ciidamada amaanka Puntland, oo codsaday in magaciisa la qariyo, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in argagixisadu gowraceen saddexdaas askari kuwaasoo la afduubtay asbuucaan bilowgiisii.
Horaantii asbuucaan, Isaga oo la hadlayay warbaahinta joogta Puntland, Jaamac Maxamed Khuurshe, guddoomiyaha Qandala, waxaa uu sheegay in maleeshiyadu ay jidka u galeen gaari ay saarnaayeen dad dhowr iyo toban ah oo ku socday Boosaaso ayna afduubteen ilaa iyo sagaal qof, oo ay kamid ahaayeen shan askari oo katirsanaa ciidamada Puntland kuwaasoo shaqada fasax ka ahaa.
Afduubashada kadib, labo kamid ah askarta Puntland oo ay afduubteen ayna haysteen ISIS ayaa ka baxsaday, sida ay ilo-wareedyo u sheegeen Puntland Mirror.
Sida uu sheegay sargaalka latirsan ciidamada ammnaaka, kadib marki la bireeyay, madaxyada askarta la gowracay ayaa la dhigay deegaan u dhow magaalada Qandala.
7-dii bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay, Ciidamada dowladda Puntland ayaa dib u la wareegay magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari, taasoo gacanta ISIS ku dhacday bishii Oktoobar sanadkii 2016-kii.
February 8, 2017 ISIS oo sheegatay masuuliyada weerarkii lagu qaaday huteel kuyaala magaalo xeebeedka Boosaaso
October 11, 2016 Warbixin Gaar ah: Joogitaanka ISIS buuraha Galgala Puntland
January 28, 2017 Maleeshiyada ISIS oo sagaal qof ku afduubtay duleedka magaalo xeebeedka Qandala
November 4, 2016 Xaalad abaareed oo daran oo ka jirta dhammaan gobolada Puntland
ISIS terrorists beheaded 3 Puntland soldiers in Bari region
Milatariga Mareykanka oo sideed duqeymood ka geystay gudaha Soomaaliya tan iyo 2018
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa gudaha Soomaaliya ka geystay sideed duqeymood oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab tan iyo sanadkan 2018, sida ay muujineyso xogta warbaahinta The Bureau Investigative Journalism. Duqeyntii ugu horeysay ee Mareykanku [...]
Ugu yaraan shan madfac oo ku dhacay banaanka hore ee xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo madaxweynaha cusub uu xafiiska la wareegay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan madfac oo looga shaki qabo ururka Al-Shabaab ayaa ku dhacay banaanka hore ee xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee gudaha Muqdisho maanta oo Khamiis ah, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Ugu yaraan [...]
Puntland President arrives in Mogadishu for Somali national forum
Mogadishu-(Puntland Mirror) The Puntland President Abdiweli Mohamed Ali has arrived on Tuesday in the Somali capital, Mogadishu, to attend the national forum between the Somali political leaders. The president was welcomed at the Mogadishu airport [...]